सिल्टल्ट शेयर7एक स्क्रैपिंग उपकरण को सर्वश्रेष्ठ विशेषताहरु
डेटा स्क्रैपिंग स्टुडियो को उपयोग गरेर, तपाईं आफ्नो रुचि को वेबसाइटहरु लाई कम से कम5मिनेट. कुनै संदेह छैन, यो सर्वोत्तम र सबैभन्दा उपयोगी मध्ये एक वेब स्क्रैपिंग इन्टरनेटमा उपकरणहरु हो. डाटा स्क्रैपिंग स्टुडियोमा शक्तिशाली र प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्फेसेसन छ र अज्याक्स साइटहरू, पासवर्ड-सुरक्षित साइटहरू, सरल र गतिशील साइटहरू, XML, JSON र अन्य समान स्रोतहरू डेटाबाट स्क्रैप गर्दछ। - marine appraiser. यसको केही अचम्मका विशेषताहरू तल उल्लेख गरिएको छ.
1. सजिलो खोजशब्द खोज:
सबै अन्य प्रसिद्ध स्क्रैपर्स जस्तै, डाटा स्क्रैपिंग स्टुडियो खोजशब्द खोज गर्न को लागि एक राम्रो तरिका प्रदान गर्दछ।. तपाईले भर्खरै यो डाउनलोड गर्न र यो उपकरण सक्रिय गर्नु पर्छ र तपाईंको कुञ्जीपाटीमा आधारित तपाईंको डेटा व्यवस्थित गर्न प्रयोग गर्दछ. यसले प्रेरणा प्राप्त गर्न धेरै खोजशब्दहरू र वाक्यांशहरू ल्याउँछ. यसैले, न केवल तपाईंको डेटा स्क्रैप गर्दछ तर यो तपाईंको छोटो पूरै र लामो-पूरै कुञ्जी शब्दहरूमा आधारित प्रबन्ध गर्दछ.
डाटा स्क्रैपिंग स्टुडियो केवल खरगोश हो जसले प्रयोगकर्ताहरूको लागि राम्रो बजार खोजी गर्दछ।. अन्य साधारण डेटा स्क्रैपर्स को विपरीत, यस उपकरणले तपाईको खोजीमा आधारित गुणवत्ता परिणाम दिन्छ. यसरी, यो बजारमा, अनलाइन शोधकर्ताहरू, विद्यार्थीहरू, पत्रकारहरू र विद्वानहरूको लागि एकदम सही छ.
3. वेब डाटा एकीकरण:
डाटा स्क्रैपिंग स्टुडियो प्रयोग गर्ने सबै भन्दा राम्रो कारण यो वेब डेटा एकीकरणको लागि उपयोगी विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।. यो सबै वेब ब्राउजरहरू र अपरेटिङ सिस्टमसँग मिल्दो छ, यो तपाइँ सजिलो बनाउन तपाईंको डेटा स्क्रैप गर्न र तपाईंको चाहना अनुसार यसलाई एकीकृत गर्न.
4. डेटा तुलना
माथिको शीर्ष डेटा स्क्रैपर्सले दुई वा बढी वेबसाइटहरूको डेटा तुलना गर्न सक्दैन. धन्यबाद, डाटा स्क्रैपिङ स्टुडियोसँग यो विकल्प छ र तपाईंलाई विभिन्न वेब पृष्ठहरूको डेटा विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ कि तपाईलाई गुणस्तर र विश्वसनीय परिणाम पाउनु हुन्छ. यसबाहेक, यो उपकरणले डेटालाई बिस्तारै सम्पादन गर्दछ, तपाईंको आउटपुटबाट सबै हिज्जे र व्याकरणिक त्रुटिहरू हटाउँदछ.
5. गुणस्तरको अनुगमन गर्दछ:
यो कार्यक्रम निकालेका स्क्रैप हुँदा तपाईंको डाटाको गुणस्तरको अनुगमन गर्दछ।. यसको मतलब तपाईं यस निकायलाई तपाइँको मनपर्ने ढाँचामा पढ्न योग्ययोग्य र स्केलेबल डेटा स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ किनभने एक्स्टेसनमा आँखा राख्न आवश्यक छैन.
6. प्रोफाईल / उत्पाद विवरणहरू उपलब्ध गराइयो:
यस सफ्टवेयरका प्रयोगकर्ता प्रोफाइल र उत्पादनको विवरणमा सजिलो पहुँच पाउदछ. यसको अर्थ हो यदि तपाईं आफ्नो ई-वाणिज्य वेबसाइटको लागि डेटा स्क्रैपिङ स्टुडियो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं अमेजन र ईबे जस्तै गुणस्तरमा सम्झौता बिना जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।. उत्पाद विवरणहरू, तिनीहरूको नामहरूको नाम, तिनीहरूका विवरणहरू र छविहरू पनि प्राप्त गर्न यो उपकरण कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ. यसैले, हामी भन्न सक्छौं कि डेटा स्क्रैपिंग स्टुडियो अमेजन स्क्रैपर र फेसबुक डेटा एक्सटेक्टर को उत्कृष्ट विकल्प हो.
विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले स्क्रैपिंग कामको अलर्टको कमीबारे शिकायत गर्छन्. साधारण उपकरणहरूको विपरीत, डाटा स्क्रैपिङ स्टुडियोले डाटालाई स्क्रैप गरेपछि तपाईंलाई सजग गराउनेछ. तपाइँ भर्खरै यसको सेटिङ्हरू समायोजन गर्न र आफ्नो इनबक्समा सूचनाहरू प्राप्त गर्न सुरू गर्न आवश्यक छ. तपाईं यसको विशेष विकल्प प्रयोग गरी तपाईंको मोबाइलमा सचेत हुन सक्नुहुनेछ. यसैले, डेटा स्क्रैपिंग स्टुडियो पूर्ण सफ्टवेयर हो जुन तपाईंको डाटा निष्कर्षण प्रक्रियालाई अधिक सहज र सुविधाजनक बनाउन को लागी. सबैभन्दा राम्रो कुरा हो कि यो लागत नि: शुल्क आउँछ.